Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airlines » Qatar Airways ayaa soo degtay rubuckii duulimaadkeeda Airbus A350
Airlines • Airport • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • News • Wararka Qadar • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Ammaanka • Technology • Dalxiiska • Gaadiidka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka kala duwan
Diyaaradda Qatar Airways ayaa soo degtay afar meelood meel duulimaadkeeda Airbus A350
Qatar Airways waxay filaysaa in Airbus ay aasaastay sababta asaasiga ah oo ay si joogto ah u saxday xaaladda hoose si ay ugu qanacdo Qatar Airways iyo xeer -ilaaliyeheenna ka hor intaanan keenin diyaarad kale oo A350 ah.
Badbaadada iyo amniga rakaabkeeda ayaa ah welwelka koowaad ee Qatar Airways.
Qatar Airways waxay la kaashanaysaa dhammaan shirkadaha kiraynta ah ee ay saamaysay dhulkan A350.
Qatar Airways ayaa durba qaaday tallaabo ay dib ugu soo celineyso duulimaadkeedii A330.
Ka sokow baaritaannadeeda joogtada ah si loo hubiyo nabadgelyada joogtada ah iyo badbaadada rakaabkeeda iyo diyaaradaheeda, Qatar Airways waxay si joogto ah ula socotaa xaaladda muhiimka ah ee guudkeeda Airbus A350 maraakiib kaas oo dusha sare ee fiyuuska ka hooseysa rinjiga ay hoos u dhigayso heer degdegsan. Duulimaadku wuxuu la shaqeynayaa xeer -ilaaliyihiisa si loo hubiyo badbaadada joogtada ah ee dhammaan rakaabka iyo iyada oo lagu saleynayo, oo la raacayo tilmaamaha qoraalka ah ee xeer -ilaaliyihiisa, saddex iyo toban diyaaradood ayaa hadda la joojiyay, oo si wax ku ool ah uga saaray adeegga ilaa waqtiga sababta ugu weyn in la dejiyo oo la helo xal lagu qanci karo oo si joogto ah loo saxo xaaladda hoose.
Badbaadada iyo amniga rakaabkeeda ayaa ah welwelka koowaad ee Qatar Airways. Shirkaddu waxay samayn doontaa wax kasta oo ay awooddo si ay sidoo kale u hubiso in rakaabkeedu aysan dhibsanayn markii loo idmaday in diyaaraddan laga saaro adeegga waxayna ku dadaali doontaa inay hesho xal kale si ay u siiso adeegga caadiga ah ee caadiga ah dhammaan rakaabka. Qatar Airways ayaa durba qaaday tallaabo ay dib ugu soo celinayso duulimaadkeedii A330 oo ay si dhaqso leh wax uga qabanayso saamaynta diyaaraddii A350 ee dhulka soo dhigtay waxayna hadda eegaysaa xalal kale.
Marka laga soo tago diirad -saaridda diyaaradda ee ilaalinta sumcaddeeda siinta heerka ugu sarreeya ee waayo -aragnimada macmiilka, Qatar Airways waxay la shaqeyneysaa dhammaan shirkadaha kireysiga ah ee uu saameeyay dhulkan A350 ee bilaabay inay baaraan diyaaradahooda ay saameysay.
Madaxa Fulinta Kooxda Qatar Airways, Mudane Mr. Akbar Al Baker, ayaa yiri: “Horumarkaan ugu dambeeyay, waxaan si dhab ah u filaynaa in Airbus ay arrintan ula dhaqanto fiiro habboon oo ay u baahan tahay. Qatar Airways ma aqbali doonto wax aan ka ahayn diyaarad sii wadata inay macaamiisheeda siiso heerka ugu sarreeya ee suurtogalka ah ee badbaadada iyo waayo -aragnimada safarka ugu fiican ee ay mudan yihiin. Qatar Airways waxay filaysaa in Airbus ay aasaastay sababta asaasiga ah oo ay si joogto ah u saxday xaaladda hoose si ay ugu qanacdo Qatar Airways iyo xeer -ilaaliyeheenna ka hor intaanan keenin diyaarad kale oo A350 ah. ”